Aqoon kororsi – SOOMAALPEDİA
Category: Aqoon kororsi
halkan hoose ka daawo muuqaal ku saabsan sida ay ku dhalatay iyo siday ku hirgeshay kacaankii maxamed siyaad barre ee 1969kii ka dhacay dalka soomaaliya.. Advertisements
Daawo warbixin nuxur leh oo laga diyaariyay soomaaliya oo dhinacyo badan leh.
Baydhabo, waa magaalo madaxda gobolka baay, waxa ay ku taalaa bartamaha koonfurta soomaaliya. Waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan ee dalka. Waxaa lagu tiriyaa magaalo istaraatiijiyad weyn xambaarsan, waxa ay isku xirta dalalka Soomaaliya, itoobiya iyo keenya. Magaaladu waxa ay muhiimad balaaran ugu fadhidaa isku xirka gobolada iyo degmooyinka koonfurta dalka. Baydhabo waxaa … More Daawo: Baydhabo iyo taariikhdii qarsooneyd
Muqdisho, magaalo madaxda jamhuuriyada soomaaliya. Waxa ay ku taalaa koonfurta dalka kuna teedsan tahay badweynta hindiya. Waxa ay leedahay magacyo caan ah oo ay ka mid yihiin Xamar iyo Banaadir. Sanadkan 2016 waxaa magaalada ku nool dad lagu qiyaaso ilaa 3 milyan oo qof. Muqdisho waxa ay soo martay xiliyo taariikh weyn xambaarsan. Waxayna in … More Daawo: Muqdisho iyo isbedelada taariikhiga ah..